Jumlada Weelka Jumlada ah ee dhalaalaya Dhalada Shumaca dhalaalaya oo leh warshad dabool leh iyo soosaarayaasha | Winby
Weel badan oo nadiif ah Dhalada Shumaca Matte Frosted Dhalada leh daboolka
Waxyaabaha muraayadda waara ee leh muraayad madow oo wanaagsan, daboolka alwaax ee asalka ah ayaa leh ur yar oo aan saameyn ku yeelan isticmaalka. Marka la barbardhigo balaastikada, dhalada ayaa caafimaad iyo badbaado leh oo si fudud loo nadiifin karo. Daboolka alwaaxa iyo giraanta wax lagu xiro waxay ka ilaalisaa hawada inay soo gasho, waxay abuuraan jawi xiran oo waxay ka dhigayaan mid qalalan.
Midab: Nadiif ah oo barafoobay
Isticmaal: Waxay ku habboon yihiin sameynta shumaca, keydinta dhammaan noocyada miraha, buskudka, sonkorta, shaaha, yicibta, kafeega, burka, dhir udgoon iyo waxyaabo kale oo badan, ayaa daboolaya baahiyahaaga maalinlaha ah.
1. Mashiinka qarxay / la riixay, si ballaadhan loogu isticmaalay makhaayada / hudheelka / guriga / xafladda iwm.
2. Logo loo habeeyay, qaab, cabir iyo midab iwm waa la samayn karaa iyadoo loo eegayo sawiradaada.
3. Eco-Friendly and non-sun, jirka galaas fasalkiisu amaan yahay. Kuma jiraan BPA, lead, cadmium ama waxyaabo kale oo waxyeello u leh jirka aadanaha. Baakadaha dhoofinta ee aaminka ah oo adag waxay hubinayaan shixnad nabadgelyo ah.
Cabir D7.2cm * H9.1cm D8.2cm * H9.8cm D9cm * H11cm D10cm * H13cm
Miisaanka 225g 345g 420g 630g
Midab Caddaan, madow, cawl, midab ayaa laga beddeli karaa
Hore: Faaruq maddi shumaca dhalada ah
Xiga: muraayadda matte qabow ee shumaca madhan ee haysta-champagne / Green
Faaruq maddi shumaca dhalada ah
dhalooyinka shumaca dhalada ah oo cadcad oo dabool leh bamboo